Hasan Sheekh ” wax dib u dhac ah ma jiri doonto. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Hasan Sheekh ” wax dib u dhac ah ma jiri doonto.
Hasan Sheekh ” wax dib u dhac ah ma jiri doonto.
Previous articleQM oo sheegtay in sanadkan gudihiisa Somaaliya lagu dilay 9 ka mid ah shaqaalaha gar gaarka.
Next articlePunt-land iyo Jubaland oo ku dhawaaqay xubnaha aqalka sare u sharxan.